Otu esi mejuputa ihe omuma ihe omuma | Martech Zone
N'ehihie a, m na-enyere onye ahịa aka nke gbakwunyere asambodo maka SSL ma weghaara www ha na URL ha. Iji meziwanye okporo ụzọ, ọ dị anyị mkpa dee iwu maka Apache na .htaccess faịlụ. Anyị nwere ọtụtụ ndị ọkachamara Apache na enwere m ike ịkpọtụrụ maka azịza ya, mana kama, m na-achọ ihe ọmụma ọmụma ole na ole n'ịntanetị wee chọta azịza kwesịrị ekwesị.
Enweghị m ịgwa onye ọ bụla okwu, mepee tiketi, chere na ejidere, ziga ya na injinia, ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-emebi oge. M hụrụ ụlọ ọrụ n'anya n'anya nke were oge iji zụlite ma mejuputa ya ihe omuma. Ma ọ bụ nnukwu ego maka azụmaahịa ndị na-ahụ nnukwu tiketi nkwado ma ọ bụ na-eto eto. Iwulite a kbase (dịka a makwaara ha), nwere ike ịnye ebe nchekwa ga-enyere ụlọ ọrụ gị belata arịrịọ nkwado mbata, zere arịrịọ ugboro ugboro, melite oge mkpebi, ma melite afọ ojuju ndị ahịa. N'ezie, ndị a niile, na-ebelata ụgwọ ma nwee ike melite ọnụego njigide.
Kedu ihe bụ ihe ọmụma?
Ihe omuma ihe omuma (KBase) bu ihe omuma a haziri nke oma nke nwere ike inyere ndi oru aka n'ime ya na ndi ahia aka ichota na mejuputa ihe kariri igwa ndi otu nkwado gi. Ezigbo ihe omuma ihe omuma nwere uzo a haziri ahazi nke oma ma debe ya nke oma ka ndi oru gha acho ichota ihe ha choro n'oge kachasi anya.
Ndị mmepe, ihe mmepe Kbase a na-akpọ ServiceDesk Plus mepụtara ihe omuma a na nso nso a - Etu esi ewulite ihe omuma ihe enyemaka nke Helpdesk nke na-enye usoro isii dị mkpa iji mejuputa usoro ihe ọmụma dị irè na nzukọ gị:
Debe KBase gị nke ọma site na ịhọpụta onye isi njikwa ihe ọmụma nke nwere usoro ndụ Kbase niile, site na ịchọpụta ihe ngwọta iji na-emelite mgbe niile. Gbaa mbọ hụ na ọ bụ ihe ngosi egosipụtara maka ndị ọrụ gị ịgbakwunye ma melite isiokwu ka achọrọ ha.
Nhazi gị KBase site na ịhazi isiokwu n’okpuru edemede na ngalaba edemede maka nnweta dị mfe. Nọgide na-agbanwe agbanwe, kachasị isiokwu site na ịmanye ndebiri ndebiri.
Kọwaa usoro nnabata site na ịmepụta usoro ọrụ maka ndị ọkachamara n'ihe gbasara isiokwu iji nyochaa, melite, melite ma kwado ọdịnaya ọdịnaya ihe ọmụma ozugbo.
Mee ka ikike ọchụchọ nke KBase gị dịkwuo mma site na nkpado edemede nke ọma na itinye n'ọrụ azịza nwere ike ịchọ ngwa ngwa. ọrụ afọ ojuju na mma search ike nke gị KBase site na nkpado isiokwu na kwesịrị ekwesị Keywords.
Kpebie onye ga-ahụ n'iji ọrụ dabere na ohere maka ndị ahịa gị. Nke a ga-enyocha nsonaazụ dabere na onye ọrụ kama ịmegharị ha na isiokwu na edemede ndị na-adịghị mkpa ha.
Jikwaa isiokwu gị KBase nke ọma site n'iwebata nkwado ndabere na mpaghara weghachite usoro iji weghachite edemede ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ma ọ bụ weghachite n'ihe gbasara ọdịda usoro. Nyochaa mkpesa iji melite ogo nke isiokwu gị yana arụmọrụ nke na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ.
Tags: mkpebi mkpebiọdịnaya managementNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa nkwadotiketi nkwado ndị ahịahelpdeskEnyemaka Portdeskhelpdesk tiketikbkbaseihe ọmụmaihe omuma-ihe omumanjikwaọzọportalChọọ Marketingịrụ ọrụ onweọrụ ntinye onweoche ọrụ